ချက်တင်မှာ ကိုယ်ကအက်လို.သူကပြန်ဆက်လာရင် ယဉ်ကျေးကြရအောင် – PoemsCorner
ချက်တင်မှာ ကိုယ်ကအက်လို.သူကပြန်ဆက်လာရင် ယဉ်ကျေးကြရအောင်
ကျနော်အင်တာနက်မှာစာရေးချင်တော. ကျနော်.အလုပ်က အင်တာနက်သုံးနေတဲ.ကလေးများကို အပူကပ်ရပါတယ်။
“ကလေးတွေက လေးလေးချက်ချင်တာလား” လို.မေးတော:”.မဟုတ်ဘူး စာရေးချင်တာ”လို.ပြောပြီး အသင်ခိုင်းရပါတယ်။
သည်တော.သင်ပေးမဲ.ကလေးတွေက “စာရေးချင်ရင် အရင်ချက် ရတယ်”လို. နည်းလမ်းတွေပေးပါတယ်။
သူတို.က ကြိုတင်လို. အကောင်.တစ်ခုလုပ်ပေးထားပါတယ်။
သူတို.လုပ်ပေးထားတဲ.အကောင်.နာမယ်က ယောက်ျားလားမိန်းမလား မကွဲပြားတဲ. အကောင်.နာမည်နဲ.ပါ။
အမှန်က ကျနော်တို.တရုပ်ပြည်ကနေတင်သွင်းပြီးရောင်းနေတဲ. တီရှပ်ရဲ.နာမယ်လေးပါ။
သူတို.က ဆက်ပြီးတော. အင်တာနက်သုံးရင် စကားပြောဖော်ရှိရတယ်။
ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော. mirc ဆိုတဲ.မြန်မာသူငယ်ချင်းများထဲကိုဝင်ခိုင်း။
ကိုယ်ကြိုက်တဲ.နာမယ်ဝှက်တစ်ခုပေးလို. စိတ်ကူးပေါက်ရာနာမည်တွေကို တဒိုင်းဒိုင်းနဲ. တဟိုင်းဟိုင်းလုပ်ရပါတယ်။
အဲဒီလိုတက်လာမှ နာမယ်ဘယ်သူလဲ ကျားလား မလား ဘယ်ကလဲလို.မိတ်ဆက်လို. အဆင်ပြေသွားရင် အကောင်.ပေးလို. အက်ကြတာကနေပြီးမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။
အဲသည်လိုမသိဘဲ ရမ်းသမ်းမိတ်ဆက်ရာကနေ အခုထိ ညီအကိုလို မောင်နှမလို မိတ်ဆွေတွေဖြစ်လို.နေတဲ.သူတွေရှိသလို
ပြောတာမှ မကြာသေး အထာတွေပေးလို.နောက်ဆုတ် ဘလောက်လုပ်လိုက်ရတဲ.သူတွေကလဲတစ်ပုံတစ်ပင်ပါ။
တဟိုင်းဟိုင်းအဆင်.ကိုလွန်မြောက်သွားတဲ.အခါမှာ သင်ပေးတဲ.ကလေးတွေက မေးလ်တွေပို.ပေးလို. ဖော်ဝပ်နဲ.လာတဲ.
ထဲက သူများမိတ်ဆွေတွေကို ကိုယ်မိတ်ဆွေဖြစ်အောင် ပြန်လို.မိတ်ဆက်ကြပါတယ်။
ကိုယ်က စအက်လိုက်တာကို လက်ခံလိုက်သူရှိသလို. ဘာမှန်းမသိလို. ငြင်းလိုက်သူတွေလဲရှိပါတယ်။
တစ်ချို.ကြတော.အဲ အင်ဗိုက်လုပ်ထားတာကိုအကြာကြီးလက်မခံလို. မာနကြီးတယ်ထင်မိတာ တစ်လတစ်ခါလောက်မှဆိုင်လာလို.မေးဖတ်တဲ.သူတွေပါတဲ.။
သည်မှာလဲ အဆင်ပြေသောမိတ်ဆွေ အဆင်မပြေသောမိတ်ဆွေတွေကိုကြုံရပါတယ်။
အဆင်ပြေရင်ချက် အဆင်မပြေတော.လဲထွက်ပေါ. ပြသနာမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။
အများအားဖြင်.သည်လိုမေးလ်ကတစ်ဆင်.ဆက်သွယ်မိကြသူတွေက သူလိုကိုယ်လို အလုပ်ခွင်ထဲက လူတွေများပါတယ်။
အဲသည်ထဲကနေပြီး မိတ်ဆွေဖြစ်လို. ခုထိစကားပြောကြ စာတွေအပြန်အလှန်ပို.ကြ နဲ.မိတ်ဆွေရင်းတွေအများကြီးပါ။
နောက်တော.ကျနော်ကလေးတွေက စာရေးချင်ရင် အသင်းတွေကိုဝင်ထားမှာစာရေးရတယ်ဆိုလို. သူတို.မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကနေ မြန်မာသူငယ်ချင်းများတို. ထာဝရမိတ်ဆွေများတို.ကို ၀င်ဘို.စာတွေပို.ပေးလို. အသင်းဝင်ပြီးစာတွေရေးပါတယ်။
အဲသည်မှာ စာရေးတာနည်းနည်းလေးလူသိလာတော. ကိုယ်စာနဲ.အထာကျသွားတဲ. သူတွေက အသင်းဝင်စာတွေပို.ပေးလို.
အဖွဲ.တော်တော်များများမှာ ၀င်လို.ရေးဖြစ်တယ် လူနည်းနည်းလက်ခံလာတယ်ဆိုပါတော.။
ဒီအချိန်ကြမှ ပြသနာက စတော.တာ။
တစ်ချို.က ဟေ.ကောင်ဘာလုပ်နေလဲ တို.
တစ်ချို.က ကိုယ်ရေးတဲ.စာကိုဖတ်ပြီးနှစ်သက်ရာကနေ အကောင်.ပေးလို.မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်။
သည်တော. ကျနော်ကလည်း အက်လာသူတွေကိုလေးလေးစားစား ကျနော်ခင်ဗျားနဲ.ပြောပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ အက်လာလို.လက်ခံထားသူကို လိုင်းပေါ်မှာတွေ.လို ပထမဆုံးစတွေ.လို .ဟိုင်းလိုက်ရင်
ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ် “ဘာတုန်း” “မင်းဘယ်ကလဲ ” တို.တွေ.လိုက်ရင် အတော်ကိုစိတ်ညစ်သွားပါတယ်။
ကိုယ်က စအက်လို. အပြောခံလိုက်ရရင်တော်ပါသေးတယ် ခုသူကလဲ အက်သေးတယ် နုတ်ဆက်လိုက်တာ ကိုအငေါ်တူးတဲ.လေသံနဲ.ပြန်ပြောလိုက်တော. ဖီးတော. အတော်လေးငုတ်သွားပါတယ်။
တစ်ခုတော.ရှိပါတယ် ကိုယ်က အသက်ကြီးသူဖြစ်တာရယ် လုပ်ငန်းမှာလဲလူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတော.အားလုံးက လေးလေးစားစားနဲ.အဆက်ဆံခံရတဲ.လူတစ်ယောက်ဖြစ်လို.လဲ သည်စိတ်မျုိးပေါ်တာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ.ကျနော်အမြင်ပြောရရင် ကိုယ်က သူများကို အက်ထားလို.ပြန်နုတ်ဆက်တဲ.သူကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ဖြေသင်.တယ်ထင်ပါတယ်။
အင်တာနက်မှာဆိုတာ တစ်ယောက်တစ်ယောက်မမြင်ရ တော. ကိုယ်နဲ.ပြောတဲ.သူက ဘယ်သူမှန်းဘယ်အသက်အရွယ်ရှိတယ်ဆိုတာ မသိနိုင်တဲ.အတွက် အနည်းနဲ.အများလေးစားသင်.တယ်လို.ထင်ပါတယ်။
ချက်တင်ကနေ အလွန်ကို ရင်းနှီးသွားကြတဲ.ဆိုးတိုင်ပင်ကောင်းတိုင်ပင်မိတ်ဆွေတွေ
ချက်တင်ကိုနာမယ်ဆိုးထွက်အောင် ဖျက်ဆီးနေသူတွေလဲရှိပါတယ် ။
ချက်တင်မှာအပျော်သဘောနဲ. စကြနောက်ကြ ဟာသတွေလုပ်နေသူတွေလည်းရှိနေပြန်သလို
အားအားယားယား ကြူကိုကို တို. ကြူမမ တို.ကလည်းတစ်လိုင်းသီးသန်.ပါ။
ဒါပေမဲ.ဘာဘဲပြောပြော တစ်ယောက်နဲ.တစ်ယောက်မမြင်မသိပေမဲ. ကိုယ်က အက်လိုက်လို. ပြန်ဆက်လာသူကို
In: ဆောင်းပါး Posted By: ကိုပေါက် မန္တလေး Date: May 25, 2010
” ပြိုင်ဘက်ကိုလဲ ထွက်ပေါက်လေးတွေပေးထားကြရအောင်”
မစခင်အရင်ဝအောင်ပြောကြရအောင် အပိုင်း တစ်
Leave comment9Comments & 880 views
By: စတားလုက် at May 26, 2010
ဟုတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေကျတော့လည်း တစ်ဖက်လူမအားလို့ ပြန်မပြောတာလည်း ဖြစ်ရင် ဖြစ်နိုင်တာပါပဲလေ။
By: manawphyulay at May 27, 2010
ကောင်းပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ကျ ရင် တစ်ဖက် လူ မပြောချင်အောင် ပြော တာလဲ မကောင်း ပါဘူး။
By: kolay at May 29, 2010
အင်းအကိုကြီးပြောတာမှန်တယ်ဗျ ခုခတ်လူငယ်တွေေ၇ာချက်တင်သုံးတဲ.သူတွေကပါအနည်းအများဆိုသလို၇ှိပါတယ်အင်းဘာပဲပြောပြောကိုဘယ်လောက်ပဲအသက်ကြီးကြီးငယ်ငယ်လေတစ်ဖက်လူကိုတော.၇ိုသေ၇မှာပဲကျနော်ကြားနေတာတော.မန်းနလေးမြို.ကကလေးမတွေဆိုsex အကြောင်းတွေတောင်ဗြောင်ပြော၇ဲနေကြတာတဲ.
By: aung thiha at Jun 2, 2010
ဟုတ်တယ်ဗျ…အစ်ကိုပြောသလို ကျွန်တော်လည်း ကြုံဘူးတယ်….
By: Shane Khant at Jun 5, 2010
By: aung myo at Jun 5, 2010
By: ဖြိုးဖြိုး at Sep 19, 2010
By: ei lay at Nov 20, 2012
By: မေပျိူ at Nov 20, 2012